လူထုခေါင်းဆောင်၊ စစ်အာဏာရှင်ဘက်တော်သားပေလော .
ဖ-ဆ-ပ-လ အဖွဲ.ကြီး၏ပထမအကြီမ်ညီလာခံကြီးနှင့် တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများအရေး
ရခိုင် ~ ရိုဟင်ဂျာ အရေး အပေါ် ဦးဌေးလွင်ဦး နှင့် RFA အင်တာဗျူး
Muslims of Myanmar need to practice moderate or mild and friendly POLITICAL ISLAM
FRANKS: Future looks bleak for Egypt’s Coptic Christians - Morsi constitution disregards religious freedom
[UNTUK EDARAN] Bukti Jelas Pakatan Rakyat Lebih Layak Dari BN Untuk Duduki Putrajaya
PR Is Ambitious..With Selfish Visions.
မြန်မာပြည် ဖွဘုတ်၏ ထိပ်တန်း ဂိုဏ်းများအကြောင်း
TGNA Selar Blogger UMNO Yang Memfitnahnya: "Kerja Orang Jahat Yang Memuja Nafsu"
Posted: 22 Dec 2012 09:06 AM PST
Posted: 22 Dec 2012 08:36 AM PST
I bet many journalists, especially those assigned to his functions since the late 1970s till late 1990s will not forget former Cabinet minister/Gerakan president Tun Dr Lim Keng Yaik.
Many described hima'true Malaysian' for his fair mind about our multiracial society, and to some who hadaclose encounter with him - at the Parliament, his office or elsewhere - will treasure the fun, laughter and the fond memories shared among them.
Dr Lim, 73, died yesterday after almost four decades of political struggle and upheavals - sacked by the MCA and later went on to lead Gerakan.
Former Gerakan president Tun Dr Lim Keng Yaik, 73, died this afternoon at his Petaling Jaya home. "Yes, he passed away peacefully at 5.13pm at home," incumbent party president Tan Sri Koh Tsu Koon told The Malaysian Insider inatext message. Gerakan members announced the outspoken former minister's death over Twitter today. The cause of his death is not immediately known. Lee Hui Seng,aSelangor Gerakan leader, told The Malaysian Insider that Dr Lim "was ill for some time." But Dr Lim's son, Lim Si Pin has also inheritedafervour for politics and is currently the torchbearer for the party's youth wing. Born in Perak on April 8, 1939, Dr Lim was known to beaplain-speaking politician who had helmed Gerakan for 27 years, from 1980 to April 8, 2007 when he stepped down to make way for Koh. Less known was that he first joined politics as an MCA member and had run in Perak's Pekan Baru state seat in 1969 under the Alliance – the predecessor to the current ruling Barisan Nasional coalition – which he lost. In 1971, he became Perak MCA chairman and was appointed to the Dewan Negara as senator. Dr Lim has hadalong career asafederal minister spanning nearly three decades. He was first picked to join the Cabinet in 1972, when he was made minister with special functions tasked with overseeing the New Villages and Emergency work. But the following year, he quit the post in protest against the expulsion of the MCA reform movement leaders at the time and was kicked out of MCA for reportedly going against then-MCA president Tun Tan Siew Sin. He entered Gerakan in 1973 but returned to serve in the Cabinet only in 1986, when he was appointed Minister of Primary Industries,apost he held until 2004, when his portfolio was switched. He took over as Minister of Energy, Water and Communications until February 13, 2008, quitting the post just shortly before the landmark 12th general elections. - Malaysian Insider
Scientists have madearobot move onahuman's behalf by monitoring thoughts about movement, reports
"Apakah ini merupakan tindakan sengaja pihak polis ataupun keputusan Jabatan Peguam Negara yang tidak mengadakan pertuduhan.
"Ini adalah persoalan yang tidak terjawab sehingga sekarang mengapa perkara ini dilengah-lengahkan," kata Ketua AMK Malaysia, Shamsul Iskandar Mohd Akin.
Akan tetapi, mahasiswa Umar Mohd Azmi, yang merupakan aktivis 'Occupy Dataran', telah dijatuhkan hukuman penjara sebulan dan denda RM 1,000.
Umar didakwa di mahkamah itu pada 23 April mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang Mohd Masran Mamat daripada "menangkap dan mengiringi" aktivis Mohd Fahmi Reza Mohd Zarin.
"Keringat dan perjuangan Umar Mohd Azmi untuk melihat suatu sistem pendidikan percuma yang dapat dinikmati anak petani, nelayan, pesawah, golongan menengah dibayar dengan hukuman penjara," kata Azadi dalam kenyataan media.
Katanya, pada April 2012, aktivis Mahasiswa telah mengadakan 'Occupy Dataran' untuk memaksa pemerintah memberi pendidikan universiti percuma.
Ujarnya, anak muda dan mahasiswa merupakan 'human capital' negara yang perlu ditatang dengan sistem yang dapat membantu pertumbuhan minda itu sendiri. -selangorku
雪兰莪甘榜东姑区州议员刘永山于2012年12月22日星期六在八打灵再也SS2 Mall"永恆的爱—公开哺乳活动"所发表之演讲稿： 首先我要感谢马来西亚哺乳和自然育儿协会（Malaysia Breastfeeding And Natural Parenting Association，简称MBNPA）这次能够一起和甘榜东姑州议员服务中心和雪州政府联合主办今天这场题为"永恆的爱—公开哺乳活动"。 我也要感谢许多热心商家赞助今天的活动。我们要感谢SSTwo Mall管理层为我们今天提供场地，让这场活动能够顺利进行。我也非常感谢各位台前幕后的工作人员，在场出席的漂亮妈妈、英俊爸爸，还有活泼可爱的小宝贝们。谢谢你们的出席。 今年8月，马来西亚哺乳和自然育儿协会配合世界哺乳周活动庆典，主办一场题为"永恆的爱—母乳，公开哺乳一分钟见证仪式"。受邀出席的嘉宾刚好是我的同僚兼战友，
Posted: 22 Dec 2012 06:17 AM PST
လူထုခေါင်းဆောင်၊ စစ်အာဏာရှင်ဘက်တော်သားပေလော …
"ဆန္ဒပြသူတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပြစ်တင်နေတဲ့ အဲဒီအချိန်ဟာ အစိုးရက သပိတ်စခန်းတွေကို လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ ဝိုင်းထားပြီး ဖြိုခွဲဖို့ အသင့်ပြင်နေတဲ့အချိန်၊ ဖြိုခွဲမယ်လို့ ကြေညာထားတဲ့အချိန်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဆန္ဒပြသူတွေကို ဟန့်မယ့်အစား ပါးကွက်သားတွေကို ဟန့်ခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်။ အစိုးရကို သတိပေး တားမြစ်ခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်။ ပြည်သူတွေအပေါ် ကျရောက်မယ့် အန္တရာယ်ကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ ကောင်းတယ်။ အကာအကွယ်ပေးဖို့ကိုလည်း လူအများအပြားက ဝိုင်းဝန်းတောင်းပန်ခဲ့ကြတယ်။ မျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်။ အခုတော့ အကာအကွယ်မပေးရုံသာမက ဆန္ဒပြသူတွေကို ဟန့်လိုက်တဲ့ သူ့စကားဟာ အစိုးရကို မီးစိမ်းပြလိုက်သလို ဖြစ်သွားတယ်။ ဖြိုခွဲရိုက်နှက်ချင်တဲ့ အစိုးရအတွက် အခွင့်သာသွားခဲ့တယ်။"
"ငတ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေက တောင်းဆိုတာကို ဟန့်တယ်၊ ၂၀၁၅ ကြောင့်။ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရ နှိပ်စက်တာတွေကို အကာအကွယ်ပေးတယ်၊ ၂၀၁၅ ကြောင့်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကို ချစ်ပြရတယ်၊ ၂၀၁၅ ကြောင့်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံး ၂၀၁၅ ရောက်တဲ့အခါ နောက်ထပ် သင်ခန်းစာတခု တိုးလာတာပဲ အဖတ်တင်တယ် ဆိုတာမျိုး နောင်တမရစေချင်ပါဘူး။ ၂၀၂၀ ကို ဆက်စောင့်တာပေါ့လေ။ ၂၀၂၅ ကို စောင့်ကြတာပေါ့လေ။ မသေမချင်း စောင့်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့လေ ဆိုတဲ့ ဘဝမျိုးကိုလည်း မရောက်ကြစေချင်ပါဘူး။"
ဒီဇင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၂ Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ
Marrow / chayote / chaico – ဂေါ်ရခါးသီးCabbage – ဂေါ်ဖီထုပ်ဖြူ
Asparagus – ကညွတ်
Spinach – ဟင်းနုနွယ်
Egg plant / Aubergine – ခရမ်းသီး
Bamboo shoot – မျှစ်
Bean curds – ပဲပြား
Bean spouts – ပဲပင်ပေါက်
tomato – ခရမ်းချဉ်သီး
Gourd – ဗူးခါးသီး ( အသေးစား )
Calabash – ဘူးသီး
Calabash shoot – ဘူးညွှန့်
Bitter gourd/ karilla fruit – ကြက်ဟင်းခါးသီး
carrot – မုန်လာဥနီ ( ရှည် မျောမျော ပုံ )
beet root – မုန်လာဥနီ ( အလုံး ပုံ )
White radish / turnip – မုန်လာဥဖြူ အကြီး။
Red radish – မုန်လာဥ နီ အလုံးသေး
Cauliflower – ပန်းဂေါ်ဖီ
Chinese cabbage – မုန်ညင်းဖြူ ( တရုပ် )
White mustard – မုန်ညင်းဖြူ ( ကြံမဆိုင် )
cucumber – သခွားသီး
Gherkin – သခွားငယ် ( ချဉ် )
Musk melon – သခွားသီးမွှေး
White pumpkin – ကျောက်ဖရုံသီး
yellw pumpkin – ရွှေဖရုံသီး
Okra / lady's fingure – ရုံးပတေသီး
spring onion – ကြက်သွန်မြိတ်
garlic – ကြက်သွန်ဖြူ
cardamon – ဖာလာစေ့
star of aniseed – နာနတ်ပွင့်
ginger – ဂျင်း
chives – ဂျူးဖူး
clove – လေးညှင်းပွင့်
cumin – ဇီယာ။
bay leave – ကရဝေးရွက်။
lemon grass – စပါးလင်
nut meg – ဇာဒိပိုသီး။
Cinnamon bark – သစ်ဂျပိုးခေါက်။
licorice or sweet wood – နွယ်ချို
shallot or small onion – ကြက်သွန်နီအသေးစား။
salt – ဆား
chilli powder – ငရုပ်သီးမူန့်
green chilli – ငရုပ်သီးစိမ်း
pepper/hot pepper/ cayenne pepper – ငရုပ်ကောင်း
pepper corn/ black pepper – ငရုပ်ကောင်း။
leek ( shallot, scallion ) – ကြက်သွန်မြိတ်
seasoning powder ( monosodium glutamate powder ) – အချိုမူန့်
coriander leaf/ seeds – နံနံရွက်။ နံနံပင်။
mustard seeds – မုန့်ညင်းစေ့။
mustard leaf – မုန့်ညင်းရွက်။
mint – ပူစီနံ။
tamarind – မန်ကျည်းသီး။
turmeric powder – နနွင်းမှုန့်။
saffron – ဂုန်မာန်။
အေးချမ်းမွန်မှ April Maung Maung တွင်ဖော်ပြသော သတင်းကို မူရင်းအတိုင်းမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
"Saya sampaikan kepada Pak Najib (PM Malaysia Najib Razak) marilah kita cegah hal begini terus terjadi," kata Presiden Indonesia itu kepada wartawan di Jakarta hari in seperti dilaporkan Repbulika Onlinei.
"Memang diberitahu kepada saya, …itu pandangan seseorang yang katanya disampaikan menyusul pertemuan Bapak Habibie dengan salah satu tokoh politik di Malaysia," katanya.
"Sungguhpun demikian bagi saya pilihan raya umum atau tidak tentunya harus saling menjaga, apalagi kalau merendahkan ketua negara atau mantan ketuaa negara-negara lain," katanya.
"Saya berharap, dan saya menyuarakan ini kepada Najib, bahawa kita boleh mencegah perkara-perkara seperti ini daripada terus berlaku," kata Susilo dalam satu sidang akhbar di Lapangan Terbang Halim Perdanakusumah di Jakarta Timur, dipetik Malaysia Kini yang memetik The Jakarta Globe.
"Bagi saya, sama ada akan ada pilihan raya atau tidak, semua orang saling harus melindungi satu sama lain dan tidak perlu memburukkan ketua negara atau bekas ketua negara lain," katanya.
Zainuddin memanggil Habibie dan bekas Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai "anjing imperialisme" -KD
ဖ-ဆ-ပ-လ အဖွဲ.ကြီး၏ပထမအကြီမ်ညီလာခံကြီးနှင့်တိုင်းရင်းသားလူနည်း စုများအရေး Source:FB of Baydar Lam
၁၉၄၆ ခုနှစ် ဇန္နဝါရီလ ၁ရ ရက်နေ.မှ ၂၃ ရက်နေ.အထိကျင်းပသော ဖ-ဆ-ပ-လ (ဖက်ဆစ်ဆန်.ကျင်ရေးနှင့်ပြည်သူ.လွတ်မြောက်ရေး)အဖွဲ.ချုပ်ကြီး၏ ပထမဆုံးသော နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညီလာခံကြီးကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ယင်းညီလာခံကြီး မှလွတ်လပ်ရေးအတွက်ပဓာနကျသောဆုံးဖြတ်ချက်(၈)ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းဆုံးဖြတ်ချက်များအနက်မှ ဆုံးဖြတ်ချက် အမှတ်(၆) သည်တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့်ပက်သက်ပါသည်။၎င်းညီလာခံကြီးကိုပါတီနှင့်အဖွဲ.ပေါင်းစုံ (၁၅)ဖွဲ.မှကိုယ်စားလှယ်များအပြင်ရှမ်း၊ချင်းနှင့်ကချင် တိုင်းရင်းသားအချို.လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများနှင့်ဗမာအမျိုးသားအများစုတို.ကို တကယ်ပင်ရင်းနှီးရေးအတွက်အောက်ပါအချက်များကို ကွန်ဂရက်ကြီးကအသိအမှတ်ပြုကြောင်း(က) ဘာသာတရားကိုလွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်ပြုရမည်။(ခ)ယဉ်ကျေးမှုတွင်လွတ်လပ်မှုရှိရမည်။(ဂ)စီးပွါးရေးတွင်အခွင့်အရေးတန်းတူရမည်။(ညီတူညီမျှဖြစ်လာအောင်လည်းကြိုးစားရမည်)။(ဃ)ဗမာနိုင်ငံအသင်းထူထောင်ရာ၌(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကိုဆိုလိုသည်) တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလူမျိုးတိုင်းကအားလုံးသဘောတူလွတ်လပ်စွာတည်ထောင်ရမည်။ဤသို.တည်ထောင်ရာ၌လည်းမိမိတို.ကံကြမ္မာကိုမိမိတို.ဘာသာဖန်တီးနိုင်ခွင့်ကိုလည်းလူမျိုးတိုင်းအားပေးရမည်။
ဗမာမွတ်စလင်များသည် ရှေးအခါကမိမိတို.ကိုယ်ကို နိုင်ငံခြားသားများဟုထင်ကာ ဗမာနိုင်ငံရေးတွင်မပါမဝင်ပဲ လျစ်လှူရှု. နေခဲ့ရာမှ ယခုအခါ ဗမာမွတ်စလင်များသည် ဗမာဖြစ်ကြောင်းအမြင်မှန်ရလာသဖြင့်ဤညီလာခံသဘင်ကြီးက အထူးဝမ်းသာအားရ ချီးကျုးပါကြောင်း။ထိုကဲ့သို. သဘောထားကြသော ဗမာမွတ်စလင်များအား တိုင်းရင်းသာလူနည်းစုများ ရသင့်ရထိုက်သောအခွင့်အရေးများကိုပေးရန် ဤညီလာခံသဘင်ကြီးက သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်သည်။
Posted: 22 Dec 2012 02:15 AM PST
Yes, we all need to work and earn enough because we all need to feed ourselves, our families and other fellow Muslims in distress especially including Rohingyas. At the same time we all need to fulfill the religious duties imposed on us by Allah.
Some Muslims may NEVER WISH TO FEED Monks who were seemed leading the Anti-Islam, Anti-Myanmar Muslims, Anti-OIC and especially Anti-Rohingya campaign.
Our recent work to help the treatment of Injured Monks is part of POLITICAL ISLAM. We need to extend our helping hand to show our fellow countrymen and clergy that we are not against them and not their enemy.
My brothers and sisters in Islam need to accept plurality. We need to agree to DISAGREE. This is the right of all the persons to protest, disagree and try to teach others so that others would accept your views. But there must bealimit to opposing others who are different from you. If the other party has different opinion and decided to do his way, you have the right to say I don't agree but should not relentlessly keep on insisting your views on others especially your version of Fatwas or Islamic views.
Hitting under the belt by using false news asapersonal attack or character assassinating if it even extended to the family members in e-mails, blogs and FB to discredit the opponent is notavery civilized manner for those from Myanmar Muslims and Burmese or Rakhines and people affiliated to the Military.
I had already wrote earlier, you all do your way and we will stick to our way. For the brothers and sisters in Islam, must understand that we all, including you and those who left our group are doing for Islam and especially Muslims of Myanmar. I hope one day we could join back our hands for the sake of Islam.
I wish to tell our Buddhist friends, Bamas, Rakhine, democratic forces and those affiliated to military, we all love Myanmar and wish to see peace and prosperity like your good-selves.
In political Islam, we could not very strictly practice according to the Islamic rules or Fathwas of all the groups and sects especially if their views are radical. We need to practice moderate ways or political Islam.
No need to argue who is right or wrong but need to look from the Socio-political point of view. If we try to impose our version of STRICT NARROW MINDED religious version on our brother Muslims we could never work together.
FYI I was brought up under the strict Islamic views of my late father (may Allah have mercy on him and reservedaplace in Jannath for him), who regularly went to Tabaligh and follow the Ulamas. I had even wrongly hated the Islamic council…Now I understand that Islamic council views are more appropriate for Political Islam. I am not telling that Tabaligh and the Ulamas are wrong but they used to see all the things according to the very strict Islamic Point of View which they had learn. Actually Islamic teachings could be interpreted inamoderate way as there is no compulsion in Islam and there are different grades of grey and rainbow colours is we interpret rightly. We could find moderation, plurality and peaceful friendly ways in Islamic teachings.
We all could practice what we believe personally in our homes and our preferred Masjids with friends of our sect and views.
We need to do politics or practice moderate or mild and friendly POLITICAL ISLAM to be able to survive asaminority in Burma or Myanmar.
Coptic Christians in Egypt have long suffered discrimination and violence. Duringa2011 New Year's Eve service ataCoptic church in Alexandria, for instance,abomb explosion killed more than 20 and injured 70. The brutal attacks in Alexandria and in Cairo's Maspero section occurred shortly before the fall of the Mubarak regime and during the subsequent interim military government. Bishop Angaelos, general bishop of the Coptic Orthodox Church in the United Kingdom, succinctly described the plight of the Copts in Egypt, especially after the Arab Spring: "I think the problem is ever since the [Arab] uprising, there is still no accountability. We've had churches bulldozed, we've had churches burnt down, we've had Christians killed, we've had villages torched, and it's almost the same as it was before. No one's been brought to justice, no convictions, and so therefore, no justice at all." The impunity with which the attacks against Coptic Christians were carried out is striking and deeply troubling.
Once the constitution begins to take effect, we will witnessanew era of additional repression in Egypt. The first few constitutional articles — the foundation of Egypt's new legal framework — are especially frightening once the implications are assessed and the articles are viewed in context of one another. Article2maintains that Shariah, Islamic religious law, is the basis of legislation. Religious freedom analysts have argued that Article3essentially sends Egyptian society toapre-modern system where non-Muslims were extendedalimited degree of state protection but were relegated to second-class citizenry in public life. Additionally, Article4givesanon-elected, sectarian body, not the Egyptian parliament, arbitration rights to decide how Shariah and current and subsequent legislation should be implemented for all Egyptian citizens.
The legal framework that should ensure equality for all Egyptian society is severely compromised in this new constitution. The United States, and the Obama administration in particular, must undertake every effort to side with the principles of religious freedom for all and underscore the importance of religious pluralism. Unless this happens, Egypt may be completely swallowed up by an Islamist dictatorship asaresult of this constitution, and the Coptic Christians and other religious groups will be in extreme peril underaMorsi regime. Washington Times. Rep. Trent Franks, Arizona Republican, is co-chairman of the International Religious Freedom Caucus.
Posted: 22 Dec 2012 04:03 AM PST
Laporan Ketua Audit Negara 2011 yang dikeluarkan pada tahun menunjukkan pengurusan fiskal yang baik oleh semua empat negeri yang dikuasai Pakatan Rakyat iaitu Selangor, Pulau Pinang, Kelantan dan Kedah dari segi perolehan pendapatan.
"It's good for them. There are good Pakatan and BN managed states. I congratulate them," said Minister in the Prime Minister's Department Nazri Aziz, atapress conference held at the Parliament lobby today.
"If we wanted to hide facts, we would have hidden all the praises meant for Pakatan led states," he said.
On accusations that the AG report was "filtered", Nazri dismissed the claims outright saying it was baseless.
"How can we 'filter' the report? Besides, we have no ability to hide anything. People these days are too advanced," said the Padang Rengas MP.
"All ministries will wrap up their debate on Budget 2013 this week. So MPs will haveaweek to study the AG report and raise issues next week," he said. -FMT (15/10/2012)
Posted: 22 Dec 2012 12:43 AM PST
Maung ZarniMaung Zarni is founder of the Free Burma Coalition andafellow at the London School of Economics. Maung Zarni is founder of the Free Burma Coalition (1995-2004) andavisiting fellow (2011-13) at the Department of International Development, London School of Economics. His forthcoming book on Myanmar will be published by Yale University Press.
Inaweek's time, US President Barack Obama is scheduled to visit Asia's – and perhaps the world's – hottest destination: Myanmar. He should "see" the ugly realities of the country's reforms that lie just beneath their surface and hear the cries of the wretched of Myanmar, such as the Muslim Rohingya and the Christian Kachins.
Through their eyes, reforms – and bringing on board Aung San Suu Kyi, their long-time nemesis – is the last resort both for themselves and the society at large. This is the existential background against which changes in Myanmar need to be understood.
What really triggers these changes is as important to understand what prospects – and challenges – lie ahead. Further, what real-world impact are these unfolding reforms having on the lives of the public, ethnic majority Bama and non-Bama ethnic minorities such as the Kachins in the North, the Rohingya in the West, the Shans and the Karens in the East?
In dealing with unhappy Arab Streets, the House of Saud, for instance, has thrown billions at the Sultanate subjects to placate the latter while the Jordanian crown has created wiggle room for its subjects. Former generals in Naypyidaw, or "Abode of Kings", have in part adopted this "buy-the-impoverished-population" approach. The catch here though is this: Unlike the House of Saud which sits on the world's largest reserve of "black gold", the cash-strapped reformist President Thein Sein – cash-strapped because the country's revenues have been stashed away in personal bank accounts of senior and junior generals – wants the international community, including the UN, international lending agencies and development banks, and "donor" countries, to foot his administration's bill.
Emphatically, the generals are, however, pursuing reforms largely for the wrong reasons – for their own long-term survival, both as powerful military families and as the most powerful institution with "a deeply ingrained corporate sense of entitlement to rule". Motives do matter. Asadirect consequence, they remain wholly unprepared to do the needful in terms of what will really promote public welfare and advance the cause of freedom, human rights and democracy.
When it comes to economically and strategically important regions on the country's peripheries, that is, the ancestral homes of the country's 40 percent of ethnic minorities such as the Kachin, the Rakhine, the Shan, the Karen, the Mon and the Karenni, the reforms simply translate into forced displacement, the rise in militarisation,asharp increase in war-fleeing refugees, loss of livelihoods and so on. It is indeed no coincidence that all fresh waves of violence, atrocities and raging wars happen to be in the ethnic minority regions designated to be homes of virtually all mega-development initiatives, commercial projects, resource extraction, Special Economic zones and industrial agricultural schemes – worth billions of dollars.
More ominously, many international agencies and national governments by and large view this ugly side of development – ethnic, class and provincial conflicts, large scale displacement, pervasive land confiscation, absence of human and food security, growing income disparity, etc – as the necessary cost locals must bear if they are to enjoy projected fruits of developmental reforms in some distant future. Here, the prevailing two-fold ideology of unfettered development and "sustainable economic growth" is at work.
Take, for instance, its hyped-up ceasefire talks with two of the country's oldest and most resolute revolutionary organisations – the Karen National Union in Eastern Myanmar and the Kachin Independence Organisation in Northern Myanmar. The widespread perception among the Kachin and Karen negotiators, and respective communities, is that the reformist government is more intent on imposing peace on its own terms, more or less. Naypyidaw is far more interested in exploiting natural resources in minority regions and securing strategic and commercial routes there than discussing seriously about the root cause of the country's ethnic rebellions, namely political autonomy founded on the principle of ethnic equality.
There is no denying that the country's quasi-civilian government has ushered inanew era of reforms. However, the types of reforms that President Thein Sein - an ex-general andafigurehead – is pursuing are the ones that will protect the military's core interests above all else. At heart, the reforms are largely geared towards creatinga"late developmental state" along the lines of Vietnam and China,abenign Leviathan that will secure the generals' electability on the basis of its economic performance and along popular "Buddhist" racism. When the illiberal society's deeply ingrained racism thunders the traditionally liberal discourses of human rights, democracy and multi-culturalism go muted.
Posted: 21 Dec 2012 11:55 PM PST
Amanat Haji Hadi tak pernah kafirkan Umno
Beliau berkata demikian merujuk kepada laporan akhbar Sinar Harian bertarikh 19 Disember 2012 yang bertajuk 'Tidak halang selebriti berceramah di masjid'.
Yang merasakan dirinya kafir kerana termakan cili, maka terasalah pedasnya.
Hukum kebenaran dan keadilan menyatakan "orang yang buat salah memang selalu gelabah!"
Kedua, amanat-amanat yang di bawah ini pula nak diletakkan di kategori yang macamana? Mufti, ulamak dan sekalian pencacai UMNO tiba-tiba jadi bisu kesemuanya?
It is crucial for us Muslims in general, Malays, Chinese, Indians and all other Malaysians to vote for BN in the PRU 13.
We cannot affordacluttered and incomprehensible mixed opposition to rule the country.
The PR is first and foremost, not able to honestly vouch who is actually its leader.
But we can already deduce which opposition party is the strongest and most powerful in PR.
Definitely, DAP will call the shots.
PKR is basically saddled with DSAI's deep shit and PAS is pressured with their own obviously sinful fatwa...both are fighting their losing battles within..they are ataloss of what's to be done.
DAP has been an anti-Malay party for so long until recently whereby they have tried to portray themselves as otherwise..to fish potential votes from the abundant Malay fence-sitters.
PR was born with only one obsession.
To finally kick out BN out withadeep vengeance.
While we rarely hear of BN components colliding with each other's principles, we cannot help noticed that PR cannot seem to walk together asafully cooperative single unit.
Each party wants to show that one has more fangs and is the towkay over the other.
They cannot agree broadly to so many issues.
Their main aspirations for the rakyat are increasingly full of disillusionment.
BN instead has successfully implemented many bold developments for the 55 years since Merdeka.
Islam in Malaysia has been held in high esteem and guarded with profound respect.
Our level of religious tolerance have also been well accomplished.
BN has made Malaysia the only Islamic country with so many races living harmoniously together..that isaan age old reality.
Yet, the very wealthy race are the non-Muslims despite the majority of the population being Muslim Malays..
The bulk of the Chinese have in no way been made poorer or ignored underaMalay Umno led BN regime.
They controlahuge chunk of the economy pie..are tops in Malaysia's rich and famous.
With the immensely vast economic strength, DAP will ultimately triump over PAS and PKR by becoming the leading power in PR.
DAP is the 'acid' among the opposition parties.
The other opposition parties will through time be eroded in importance.
For now, DAP will ride and play along with whatever ideals that they can purportedly agree upon.
They are in truth suspicious of each other..but they must fulfill that golden dream of defeating BN.
Naturally, they have to look united, smiling, laughing, posing for the camera for PR's positive image.
We do not want our BN led Muslim country to be history.
Our country must be prevented from beingaguinea pig under PR rule.
We must not be lulled with their make-believe promises..they certainly cannot do any special magic.
Our BN journey may have had weak leaders who have not performed up to our expectations.
But remember..there were many great BN leaders who did excellent service in turning Malaysia intoavery modern country with international recognition and fame.
Even today, we cannot deny the contribution of our BN government in their endless ongoing efforts to upgrade and improve our rakyat's standard of living.
Do not throw the key of happiness of our future generations into the hands ofabunch of hypocrites!
It's time for us to pull ourselves together and courageously fight back, to fiercely protect our precious homeland from being doomed.
Through thick and thin, UMNO has never abandoned me and millions of others.
PAS, PKR or DAP never once bothered.
As if they really care about our welfare..
K..now I can wallop my jemput2 ikan bilis..havealovely Saturday everybody..^_^
Posted: 21 Dec 2012 07:39 PM PST
Source: FB of ပလေတို ဒီမို copied from FB Wall of Aung Myo Zaw If you wish to see the picture, please look at the origin.
တစ်နေ့ တစ်၌ ကျွန်ုပ်သည် မြန်မာပြည် ဖွဘုတ်၏ ထိပ်တန်း ဂိုဏ်းများအကြောင်းကို လေ့လာမိသောအခါ အံ့သြဖွယ်ရာ ကောင်းလှသော သဲလွန်စများ တွေ့ ရှိရသောအခါ စိတ်ကို မည်သို့ ပင် ထိန်းစေကာမူ မရတော့သဖြင့် ထုံးစံအတိုင်း မိတ်ဆွေကြီး ကိုနှင်းမောင်ထံ ထွက်လာခဲ့သည်။
"အိုင်ပီရေ ခင်ဗျား မေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာက ခုနောက်ပိုင်း အုတ်အုတ်ကြွက်ကြွက် ဖြစ်လာနေတဲ့ ဖွဘုတ်နဲ့ဆက်စပ်နေမယ် ထင်ပါရဲ့ ။ ဟုတ်စ "
"ဘယ်လိုလုပ် ခန့် မှန်းနိုင်တာလဲ အိုင်ဆေး ကိုနှင်းမောင်ရေ။ ကွက်တိပါပဲဗျာ"
"စောစောက ခင်ဗျားမလာခင် ကျွန်တော် ဖွဘုတ် တက်တော့ ခင်ဗျား အွန်လိုင်း ဖြစ်နေတာ တွေ့ ရတယ်ဗျ။ ပြီးတော့ ခင်ဗျား ဒီကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်လာတာလေ။ ဒီတော့ ဖွဘုတ်နဲ့ တစ်နည်းနည်း ဆက်စပ်နေပြီပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား"
"ဟုတ်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော်လည်း ဖွဘုတ်ထဲမှာ ကြည့်ရင်းနဲ့ခင်ဗျားကို မေးချင်လို့ထွက်လာတာဗျို့ ။"
ကိုနှင်းမောင်က ရေခဲတောင်စီးကရက်ကို ဟန်ပါပါ မီးညှိလိုက်ပြီး-
"အိုင်ပီရေ မဟုတ်မှလွဲရော ဒီမိုဖက်တီးအကြောင်းလား။ ပလေတိုဒီမိုအကြောင်းလားဗျာ"
ဟု မေးမြန်းလေရာ ကျွန်ုပ်မှာ အံ့သြခြင်း ကြီးစွာ ဖြစ်ရလေ၏။
"ကွက်တိပါပဲ ကိုနှင်းမောင်ရေ။ ဒီမိုဖက်တီးအကြောင်းပေါ့ဗျာ။ ဒီမိုပါတီကြီး က သူတို့ နဲ့မဆိုင်ဘူး လို့အတိအလင်း ပြောထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖက်တီးက တစ်ကယ့်ကို လူရင်း ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ဘူးလား-ဟုတ်သလား သိချင်တာနဲ့ချက်ချင်း ထထွက်လာတာပေါ့ဗျာ"
ထိုအခါ ကိုနှင်းမောင်မှာ ခါးတွင်ချိတ်ထားသော ဟန်းဖုန်းကို ဆွဲယူလိုက်ပြီး ဖွဘုတ်ထဲမှ ဒီမိုဖက်တီး အကောင့်ကို ပြသလေတော့သည်။ ယင်းနောက် ဒီမိုဖက်တီး၏ ဝေါလ်တွင် တင်ထားသော စတေးတပ်စ်များကို ပြလိုက် ကျွန်ုပ်အား ရှင်းပြလိုက်နှင့် ကွင်းဆက်များ ချိတ်ဆက်ပြလေတော့သည်။
မြန်မာပြည် ဖွဘုတ်လောကတွင် ဒီမိုအုပ်စု အတင်းအဖျင်းအုပ်စု၏ ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ကြီး ဟူ၍ ဘ၀င်မြင့်နေလေသော ဒီမိုဖက်တီး၏ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း ဖြစ်လာလေတော့သည်။
( ဟေ့ ကောင်မ ဟိုလူကြီး ငါ့ကို လိုက်လုပ်တယ် ဟဲ့။
နင်တော့ နာမည်ကြီးနေပြီ။ ကောင်မ သတိလည်း ထားဦး။
ကြည့်စမ်း ငါ့ကို တက်လုပ်သွားပြန်ပြီ။
ဒင်းက နင့်ကို တက်လုပ်နေတာ နင်ငြိမ်ခံမနေနဲ့ ။
ထားလိုက်ပါ ငါ လိုက်လုပ်လိုက်ဦးမယ်။ )
ဤကား ဖက်တီးတို့ ၏ နေ့ စဉ် တွေ့ ကြုံနေကျ ဖြစ်ရပ်များပင်။
ဤ အတင်းအဖျင်း ဖွဘုတ်ကို မင်းမူထားသော ဒီမိုဖက်တီး ခေါ် ခွန်ဒီးယမ်း ခေါ် မေဇင်အေးသည်ကား ယခုကဲ့သို့ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်နေရာကို အလကား ရယူနိုင်ခြင်း မဟုတ်ပေ။
ဖက်တီးကား ကံဇာတ်ဆရာ၏ စေစားမှုကြောင့် နိမ့်တစ်ခါ မြင့်တစ်လှည့် ရှိခဲ့သော်လည်း အနိုင်မခံအရှုံးမပေး ဖွတတ်သောစိတ်ဓါတ်မှာ လူငယ်များ အတုယူမှားစရာ ဖြစ်လာမည် စိုး၍ အသေးစိတ်အနိဌာရုံများကိုမူ ထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်း မပြုလိုပါ။
အနောက်နိုင်ငံကြီးတစ်နိုင်ငံသို့သွားရောက်၍ အိုင်တီနှင့်ဆက်စပ်သော ပညာရပ်များ တစ်ဘက်ကမ်းခတ်အောင် သင်ယူခဲ့သော်လည်း ပင်ကိုဥာဏ် အမီမလိုက်နိုင်မှုကြောင့် ဆရာများက အချိန်ပေး၍ စိတ်ရှည်လက်ရှည် သင်ကြားပေးခဲ့ရပြီး သူများတစ်ကာ၏ စာနာနားလည်မှုဖြင့် အောင်လက်မှတ်များ ရရှိခဲ့လေသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ဖက်တီးသည် မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့အာရ်စီ တူး အတွင်းရှိ နည်းပညာဥယျာဉ်တွင် အိုင်တီကုမ်ပဏီကြီးတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ကာ စီးပွားရှာလျက် ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ ဤတွင် မူလကတည်းက မနုစာရီသီလရှင်နှင့် ရင်းနှီးမှု ရှိခဲ့သောကြောင့် ၄င်းနှင့်ဆက်စပ်၍ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ကြီး ဒေါ်စုနှင့် နီးစပ်မိလေသည်။ ဖက်တီး၏ ရမ်းကားမှုကို ဒေါ်စုက သိသော်လည်း သနားဖွယ်ရာကောင်းလှသော ဘဝေပေး ကုသိုလ်ကြောင့် ခွင့်လွှတ်ထားရရှာသည်ဟု သိရှိထားကြသည်။
ဖက်တီးတစ်ယောက်သည် ၄င်း စပွန်ဆာပေးသော ၀တ်စုံများကို ဒီမိုကရေစီ မိခင်ကြီး ၀တ်ဆင်သည်နှင့် ဓါတ်ပုံရိုက်၍ ဖွဘုတ်ပေါ် တင်ကာ အခြားပြိုင်ဘက်များအား မခံချင်အောင် စောင်းချိတ်ပြီး ရိလေ့ ထေ့လေ့ ရှိသည်။
ထိုသို့ သော နေ့ များတွင် ဖက်တီး၏ ဖွဘုတ်တွင် ဒီမိုကရေစီ မိခင်ကြီး၏ ဓါတ်ပုံများ ပလူပျံနေလေတော့သည်။
တစ်ဖန် ဖက်တီးသည် သည်လေဒီ ဟူသော မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ကို အရှုံးခံကာ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ယင်းမဂ္ဂဇင်းမှာ မရောင်းရသည့်အပြင် ဖတ်ရှုသူနည်းလှသောအခါ မိဘမဲ့ကျောင်းနှင့် မေရီချပ်မင်းကျောင်းများသို့အခမဲ့ သွားရောက်လှူဒါန်းလေ့ ရှိသည်။
၀မ်းနည်းဖွယ်ရာကောင်းသည့် အချိန်များလည်း ဖက်တီးဘ၀တွင် များစွာ ရှိခဲ့လေသည်။
ခွပ်ဒေါင်းမိခင်ကြီး ပြည်ပခရီးသွားရောက်သည့်အခါ ဖက်တီးမှာ သူများနည်းတူ ကြိုဆိုချင်လှသော်လည်း အခြေအနေအရ မော်တော်ကားပေါ်တွင် ထိုင်ကာ ငေးကြည့်နေခဲ့ရသည်။
ဒီမိုမိခင်ကြီးကလည်း ဖက်တီးကို အထူးပင် အရေးပေးသည်။ ဖက်တီး၏ဘ၀ကို စာနာနားလည်သူမှာ ဖက်တီးဘ၀တွင် မိဘအရင်းများပြီးလျှင် ဒီမိုမိခင်ကြီးသာ ရှိပေသည်။
တစ်ခါသော် စတုတဒေါက်တိုင်မှ ရခိုင်သား လူငယ်လူရွယ်ကလေးတစ်ဦးနှင့် လူငယ်တို့ သဘာဝ ငြိစွန်းမိလေသည်။ (ပြဿနာ ဖြစ်သည်ကို ငြိစွန်းသည် ဟု ရည်ညွှန်းပါသည်)
ဖက်တီးဘ၀ အိပ်၍မပျော်သော ညများ ရှည်ခဲ့ရပြီ ဖြစ်သည်။ အလွမ်းတွေကို စမ်းရေနှင့်မျှောရတော့သည်။ ဖက်တီးမှာ မစားနိုင် မအိပ်နိုင် ဖွဘုတ်ကို တဖွဖွကြည့်၍ တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲခဲ့ရသည်။ သို့ သော် ကျားနှင့်မ မတူညီသော ဆဲဆိုမှုတွင် ဖက်တီးတစ်ယောက် လက်မြောက်အရှုံးပေးခဲ့ရသည်။ ယင်းပွဲတွင် ဖက်တီးသည် ကိုယ်ပွားအကောင့်တစ်ခု ဖြစ်သော ခွန်ဒီးယမ်းအကောင့်ဖြင့် ယောကျားလေးဟန်ဆောင်၍ အပြိုင်အဆိုင် ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းခြင်းတို့ပြုခဲ့ရသည်။ သို့ သော် စတုတဒေါက်တိုင်အုပ်စုမှာ ရက်စက် ပြတ်သားသော စကားလုံးများဖြင့် တရကြမ်း တုံ့ပြန်ခဲ့ရာ ဖက်တီးအုပ်စု မလှန်နိုင်ဘဲ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ဤတွင် ရိုးသားဖြူစင်ခဲ့သော ဖက်တီးတစ်ယောက် ယုတ်မာရက်စက်သော အကြံဥာဏ်များ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ကုလားမနိုင် ရခိုင်မဲ၊ ရခိုင်မနိုင် ပိုင်ရှင်မဲ ဟူသော စကားပုံအရ ဖက်တီးသည် ၇ ရက်သတင်း၈ျာနယ် ထုတ်ဝေသူ ပိုင်ရှင်ထံသို့ဆက်သွယ်ရလေတော့သည်။ ယင်းပိုင်ရှင်ပုဂိုလ်မှာ ဖက်တီးနှင့် လုပ်ငန်းတူများ ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ရင်းနှီးမှု ရှိပြီး ဖြစ်၏။
သို့ သော် ဖက်တီး၏ ဂိုဏ်းလက်ထောက်များ ဖြစ်ကြသော သိုးကလေး၊ ခင်ကလျာစိုး၊ ဒီချစ်သူ စသည်တို့ က ၀ိုင်း၍ တားမြစ်ကြသော်လည်း ဖက်တီးကို တားမရတော့။ ဖက်တီးမုန်ယိုလေသောအခါ မည်သူ့ စကားမျှ နားမထောင်တော့ပေ။ ဤကား ဖက်တီး၏ အားနည်းချက် ဖြစ်လေတော့သည်။
ဖက်တီးကား ကြမ်းတမ်းလှသည်။ စတုတဒေါက်တိုင်မှ အုတ်ခဲ ကိုလူချောကို အလုပ်ဖြုတ်ပစ်ရန် အပြင်းအထန် တောင်းဆိုတော့သည်။ ၇ ရက်ပိုင်ရှင်မှာလည်း အလကားနေရင်း အလုပ်ဖြုတ်ရမည့် အနေအထားကို မနှစ်မြို့ ပေ။
သို့ သော်လည်း ဖက်တီးလာရောက်ခဲ့စဉ်က ငိုကြီးချက်မနှင့် နှပ်တွေထွက် ချီးတွေထွက်အောင် မြေပေါ် လူးလှိမ့်ကာ တောင်းဆို ခဲ့သောကြောင့် ဖက်တီး၏ တိတ်ခိုး ချစ်သူ အုတ်ခဲကိုကိုကို ခေါ်ယူ၍ သတိပေးရတော့သည်။
ဤတွင် ဖက်တီး၏ ကိုလူချောမှာ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်၍ ဖက်တီးကို စိန်ခေါ်၍ မိုးပေါ်တက်လေတော့သည်။ အုတ်ခဲကိုကိုမှာလည်း နှယ်နှယ်ရရ မဟုတ်။ စူထက်စူ လူစွမ်းကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ရာ အနိုင်မခံ အရှုံးမပေး။ အလုပ် ပြုတ်ချင်ပြုတ် ဟူသော စိတ်ထားဖြင့် ပြန်လည် တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့လေသည်။
သတိရှိရှင် အပြေးပြိုင်မယ်။ အချိန်မရွေး ထွက်ခဲ့။ ဤစကားသံမှာ ဖက်တီးကို ပက်ပက်စက်စက်ကြီးကို ဖိစီးနေလေတော့သည်။ ဖက်တီးတို့ ဖြစ်စဉ်ကို ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် ဘင်္ဂါလီသတင်းဌာနကပင် ထုတ်ဖော် ရေးသားခဲ့ရသည့် အခြေအနေသို့ဆိုက်ရောက် ခဲ့သည်။
အမှန်တရားဘက်တွင် ဖက်တီး မရှိသော်လည်း ဖက်တီးတွင် အသိုင်းအ၀ိုင်းရှိသည်။ ငွေရှိသည်။ နောက်ခံရှိသည်။ ဒီမိုမိခင်ကြီး ရှိသည်။ ထို့ ကြောင့် ဖက်တီး ထင်တိုင်းကြဲလေတော့သည်။ (အမှန်မှာ ဖက်တီးသည် အုံ့ ပုံးအချစ်ဖြင့် မေတာသက်ဝင် စုံမက် ချစ်ခင်နေခြင်း ဖြစ်သော်လည်း တစ်ဘက်မှ တုံ့ ပြန်ခြင်း မရှိသောအခါ အချစ်ကြီး၍ အမျက်ကြီးရခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည်)
အုတ်ခဲကိုကိုမှာ ဖက်တီး၏ တစ်ဘက်သတ် လိုက်လံ ချဉ်းကပ်နေခြင်း သာမက အလုပ်ရှင်မှတစ်ဆင့် အလုပ်ထုတ်ပယ်ခြင်းခံရမည့် အရေးကို ကြောက်ရွံ့ ခြင်း မရှိဘဲ အဆုံးစွန်တိုက်ပွဲ ဆင်နွဲမည်ဟူသော စိတ်ပိုင်းဖြတ်ချက်ဖြင့် ရဲရဲတောက်နေလေရော ဖက်တီးတစ်ယောက် မနိုင်ဝန်ထမ်းရသလို အခက်ကြုံနေခဲ့ရသည်။
နောက်ဆုံးတွင် ဖက်တီး တစ်ယောက် ကြံရာမရတော့သည့်အဆုံး ဂိုဏ်းပေါင်စုံ မဟာမိတ် ဖိတ်ခေါ်အစည်းအဝေးကြီးတစ်ရပ် ကျင်းပရန် စီစဉ်လေတော့သည်။ အိုင်တီကုမဏီများ စုစည်းပြုလုပ်သည့် အစည်း အဝေးတွင်လည်း ဖက်တီးသည် ၇ရက်ပိုင်ရှင်အား ငိုပြယိုပြ၍ လော်ဘီလုပ်လေတော့သည်။ ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ မဟာမိတ်အစည်းအဝေးတွင်လည်း ဖက်တီးတစ်ယောက် အိပ်မပျော် စားမ၀င် ဆရာဝန်နှင့် ကုသနေရသည့် သတင်း ထွက်ပေါ်လာတော့သည်။
ဤတွင် ၇ရက်ပိုင်ရှင်မှာ မတရားမှန်း သိသော်လည်း မျက်စေ့စုံမှိတ်၍ အုတ်ခဲကိုကိုကို ဖိအားပေးရတော့သည်။
ယင်းကာလတွင် ကလိမ်ကကျစ်နည်းလမ်းပေါင်းစုံ သုံးခဲ့ရသည့်အတွက် ဖက်တီးမှာ နာမည်ပျက်ခဲ့ရသည်။ နာမည် အပျက်ခံ၍ တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရသော ဖက်တီး၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှာ နောက်ဆုံးတွင် အရာထင်ခဲ့လေသည်။ အုတ်ခဲကိုကိုက ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်လိုစိတ် မရှိတော့သဖြင့် အလံဖြူထောင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ဖက်တီးဂိုဏ်းဝင်များမှာ အဆိုပါသတင်းကြောင့် အောင်ပွဲခံကာ (၇)ရက် (၇)လီ မြူးတူး ပျှော်ပါးခဲ့ကြရာ ဒီမိုမိခင်ကြီးကပင် ၀င်၍ သတိပေးခဲ့ရသည်။
၄င်းနောက် ဖက်တီးမှာ ဖွဘုတ်လောကတွင် မည်သူ့ ကိုမျှ ဗိုလ်မထားတော့ဘဲ မည်းမည်းမြင်ရာ ပတ်ရမ်းလေတော့သည်။ ဂေါ်ဗာချော့တို့ ဌာနေမှ ကျောင်းသားများနှင့် အချင်းများသော အခါ ဖက်တီး၏ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်းကို မြေလှန်၍ ဖော်ကြလေတော့သည်။ ဤတွင် ဖက်တီးမှာ အကြီးအကျယ် အရှက်ကွဲရသည်သာမက ဒီမိုမိခင်ကြီးကိုပါ ထိခိုက်လာမည့် အလားအလာများ ဖြစ်လာလေတော့သည်။
ဖက်တီး၏ ဓါတ်ပုံများလည်း ဖွဘုတ်ပေါ်တွင် ရုတ်ချည်းထွက်ပေါ်လာခဲ့ရာ တမဟုတ်ချင်း ပြန့် နှံ့ သွားခဲ့ရသည်။ ဖက်တီး ဘ၀မှန် ပေါ်သွားလေပြီ။ ဖက်တီး မည်သို့လုပ်ရမည် မသိ။
မယုံမှာ သိသော်လည်း မေဇင်အေး အကောင့်မှနေ၍ ဒီမိုဖက်တီးမှာ ၄င်းနှင့် မသက်ဆိုင်ကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ရသည်။
ဖက်တီး၏ ကလိမ်ကကျစ်ဥာဏ်မှာ ဗြောင် လိမ် ဗြောင်စား ငြင်းရန်ပင် ဖြစ်သည်။ ဒီမိုဖက်တီး အကောင့်ကို မသုံးတော့ဘဲ ရပ်ဆိုင်ထားရသည်။ ဖက်တီးမှာ မေဇင်အေး မဟုတ်ကြောင်း ဇွတ်အတင်း မျက်စေ့စုံမှတ် ငြင်းဆန်ရန်မှ တစ်ပါ။ အခြား နည်းလမ်း မရှိတော့ပေ။
ဒီမိုပါတီကြီးအတွင်း၌လည်း ဖက်တီး၏ မဆင်မခြင်လုပ်ရပ်များကြောင့် ပြဿနာတွေ တက်ခဲ့ရသည်။ စီအီးစီအစည်းအဝေးအထိ ဖက်တီခေါင်းစဉ်က ပါလာခဲ့လေသည်။ ဖက်တီးကား ပေါ့သေးသေး မဟုတ်။ ပေါ့သေးသေး မဟုတ်သည့်အပြင် အ၀လွန်၍ အချိန်စီးလွန်းနေသည်ကိုလည်း သက်သေအထင်အရှား တွေ့ မြင်နိုင်သည်။
ဒီမိုမိခင်ကြီးမှာ ဖက်တီးကို သနားလည်း သနားသည်။ ထင်ရာလျှောက်လုပ်နေခြင်းကြောင့် သိကာကျမှာလည်း စိုးသည်။ သို့သော် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်ရန်လည်း လိုအပ်နေသည်။ စီအီးစီ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်ခဲ့ရတော့သည်။ ကြေညာချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပေတော့သည်။
"Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ၌ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦး အသွင်ဖြင့် ဒီမိုဖက်တီး၊ အဂ္ဂမဟာ ဒီမိုဖက်တီး အစရှိသော အမည်များအသုံးပြု၍ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး အပါအဝင် လူအများအပြားအား ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အပုပ်ချမှုများ ရေးသားသော Facebook Account ပိုင်ရှင်သည် NLD နှင့် လုံးဝ သက်ဆိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း"
"ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ပြောပါရစေ။ အဲဒီလူနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမြင်၊ နိုင်ငံရေး အယူအဆ တွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရဲပါတယ်။ ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး အလုပ်တွေ ကျွန်တော်တို့ မလုပ်ပါဘူး။ ဒီလိုလုပ်နေတာတွေကိုလည်း အားမပေးပါဘူး။ တိုင်းပြည်အတွက်လည်း ဘာမှ အကျိုးမရှိ ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့က အဖမ်းလည်း ခံရတယ်။ ထောင်လည်း အကျခံရဲတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အမြင်တွေကို ပြောဖို့ D-Wave ရှိပါတယ်"ဟု ဦး အုန်းကြိုင်က ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
ဖက်တီးတစ်ယောက် ရင်ကွဲပက်လက် ဖြစ်ရတော့သည်။ ဒီမိုမိခင်ကြီးကား ရက်စက်လှပေသည် ဟူ၍ မချိတင်ကဲ ပဋာမြေလူး လူးလှိမ့်၍ (၇)ရက် (၇)လီ ငိုကြွေးသည် ဟူသတတ်။
မည်သို့ ပင်ဆိုစေ ဒီမိုမိခင်ကြီးက ထိုသို့ပြောကြားသည်မှာ ၄င်းကို မချစ်၍ မဟုတ်ကြောင်း ကိုယ်ရံတော် တစ်ဦးမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်ကြားသိခဲ့ရသည်။ ဖက်တီးကိုလည်း ပြသနာမီးခွက် ထွန်းမရှာရန် သတိပေးခဲ့ရသည်။
ဖက်တီးကား ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ်ပင်။ ဒီမိုမိခင်ကြီး မေ့လောက်သည်နှင့် ဖွဘုတ်သိုင်းလောကသို့ပြန်ဝင်ပြီး ပြသနာများစွာ မီးခွက် ထွန်းရှာလေတော့သည်။ ဖက်တီး၏ နောင်တသည် (၁)လပင် မကြာခဲ့ပေ။ ထိုသို့ပြန်လည် ၀င်ရောက်လာသောအခါ ဖက်တီးဂိုဏ်း ပြန်လည်အသက်ဝင်လာခဲ့သည်။
ဖက်တီး၏ နောက်လိုက် နောက်ပါများ ဖြစ်ကြသော ဖက်တီးတပည့်ကျော် ဒီချစ်သူ၊ သိုးကလေး၊ ခင်ကလျာစိုး၊ ခိုင်စိုးလင်း၊ မျိုးချစ်သူ အစရှိကုန်သော ဒီမိုအုပ်စုများသည်လည်း တအူအူနှင့် ပြန်လည်ထကြွသောင်းကျန်းကြကုန်၏။ ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင် ဖက်တီးကို အော်မီတောဖော လုပ်၍ ဖက်တီးမှာလည်း ငါဟဲ့ ဖက်တီး ဟူ၍ ကြုံးဝါးခဲ့လေ၏။
ဖက်တီး အကြောက်ဆုံးမှာ ဘ၀မှန်ပေါ်ပေါက်လာမည့် အရေးဖြစ်သည်။ ဖက်တီး၏ အဘိုးမှာ ဘင်္ဂါလီ တစ်ဦး ဖြစ်လေရာ ဘင်္ဂါလီအရေးတွင် ဖက်တီး နှုတ်ပိတ်နေခဲ့ရသည်။ ကိုးကွယ်သော ဘာသာကို လူသိမှာလည်း ကြောက်သည်။ ဘာသာတူ ဘင်္ဂါလီများက ပြန်ပြီး သစာဖောက်ဟု အမည်တပ်မှာလည်း ကြောက်သည်။ ဘာသာမတူသူများက ၀ိုင်းပြီး ဆော်ကြနှက်ကြမှာကိုလည်း ကြောက်သည်။ ဖက်တီးသာ ဘင်္ဂါလီဟူ၍ သိရှိသွားပါက ဖက်တီးဂိုဏ်းသားအားလုံး ဂိုဏ်းမှ နှုတ်ထွက်ကာ ၀ူးတန်ဂိုဏ်းသို့ပြောင်းသွားမှာလည်း စိုးရိမ်ရသည်။ ယနေ့ အချိန်အထိ ဖက်တီးမှာ ယင်းကိစ္စကို လျှို့ ဝှက်ထားခဲ့၏။ ဤကား ဒီမိုဖက်တီး၏ လျှို့ ဝှက်ချက်ကြီးပင် ဖြစ်သည်။ ယနေ့အချိန်အထိ မည်သူမျှ မသိကြပါ။
မသိကြခြင်းမှာလည်း ဖက်တီးကား ဟန်ဆောင်ကောင်းသည်။ လူ့ စိတ် အညှာကို သိသည်။ ၄င်းဂိုဏ်းသား တစ်ယောက်စီ၏ အားနည်းချက်များကို သိထားသည်။ ကောင်းစွာ အသုံးချတတ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဖက်တီး၏ တပည့်ကျော်များမှာ ယင်းတို့ ကိုယ်ကို ဖက်တီး တပည့် ဖြစ်နေမှန်း မသိ ဟု ဆိုကြ၏။ အခြား ဖွဘုတ် မိတ်တွေများက ပြောပြမှ ဖက်တီးတပည့်ကျော် ဖြစ်နေမှန်း သိလာကြသည် ဟု ဆို၏။ ဤကား ဖက်တီး၏ တော်သည့် နေရာများ ဖြစ်သည်။
ဖက်တီး ရှော်သည်လည်း ရှိပေသည်။ အုတ်ခဲကိုကိုကို တစ်ဖတ်သတ် ချစ်မြတ်နိုးနေသော်လည်း အုတ်အော်သောင်းနင်း ပြသနာဖြစ်ပွားပြီးနောက် ဖက်တီးမှာ ဝေးဝေးကသာ
လွမ်းပါမည် ဟု ဆိုကာ ကြိတ်မှိတ်လွမ်းဆွတ်နေရပြီ ဖြစ်သည်။ ဤကား ဖက်တီး၏ လူမသိ သူမသိ အုံ့ ပုံး အချစ် ပင် ဖြစ်လေ၏။
ဖက်တီးဂိုဏ်းမှာ ဒီမိုမိခင်ကြီးဘက် မလိုက်သူမှန်သမျှ ဖက်တီးက ဆော်တတ်သည်။ စောင့်ပါးရိပ်ခြေလည်း လုပ်တတ်သည်။ ကလိမ်ကကျစ် (၁၂)ကြိုး အောက်လမ်းနည်းများလည်း သုံးတတ်သည်။
တစ်ဘက်သား နာမည်ပျက်အောင် ဖျက်လိုလျှင် ဖက်တီးကိုသာ ဆရာတင်လိုက်။ ရ စရာ မရှိအောင် ဖျက်ပစ်မည်။ ဟုတ်တာရော မဟုတ်တာရော လုပ်သည်။
ဖက်တီး၏ ဘ၀ကား ဤသို့ဖွဘုတ်ဇာတ်လမ်းရှိခဲ့လေသည်။
ဖက်တီးမှာ သာမန်ညောင်ည ဖက်တီး မဟုတ်ပေ။
သုံးမည်ရ ဖက်တီး ဖြစ်သည်။
နာမည်အရင်း မေဇင်အေး ဖြစ်သည်။
ဖွဘုတ်အမည် ဒီမိုဖက်တီး၊ ခွန်ဒီးယမ်း ဖြစ်သည်။
ဖက်တီးတွင် အခြားသော နာမည်များစွာ အကောင့်များစွာ ရှိနေသော်လည်း သုံးမည်သာ ထင်ရှား၍ သုံးမည်ရ မေဇင်အေး ဟူ၍ ခေါ်တွင်ကြလေ၏။
စာဖတ်သူများ ဖက်တီး၏ ကုမဏီကို MICT Park သွားရောက် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Lady မဂ္ဂဇင်းတွင်လည်း ဖက်တီး၏ စပွန်ဆာ လက်ရာများကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ဖက်တီးနှင့် ခွန်ဒီးယမ်းတို့ ၏ ဖွဘုတ်များတွင်လည်း သွား၍ လေ့လာကြည်ရှုနိုင်သည်။
(ရခိုင်သားနေရာတွင် အုတ်ခဲ ဟု ပြင်ဆင်လိုက်ပါသည်။ ဤသည်မှာ ဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီး အလိုတည်း)
Berasaskan kepada kronologi di atas, dapatlah dibuat kesimpulan bahawa 1. Dakwaan yang menyatakan YAB Menteri Besar Kelantan telah memberikan 'habuan' kepada pemimpin DAP Perak agar memberikan laluan kepada calon PAS mengisis kerusi Menteri Besar adalah fitnah sama sekali. Tarikh perjanjian dengan Upayapadu Sdn Bhd yang ditandatangani pada3Mei 2006 dan pertukaran komposisi pada Mei 2012 adalah tidak relevan dengan tarikh pilihanraya umum 8 Mac 2008 yang menyaksikan Barisan Nasional hilang kuasa di Perak.
Inilah dia wajah UMNO yang sebenar! Barangkali, UMNO meletakkan pihak lain seperti mereka di mana setiap perkara memerlukan habuan dan balasan. Dalam hal ini, menarik juga untuk dibincangkan apakah habuan yang diperolehi oleh UMNO ketika memberikan laluan kepada parti GERAKAN untuk mengisi kerusi Ketua Menteri Pulau Pinang satu ketika dulu....
Dakwaan blog fitnah saya, kata Nik Aziz.
"Sebab itu saya sebut kalau berita yang dikeluarkan oleh akhbar terbabit kita kena berhati-hati," katanya -SH